बिबिसि भन्छ :संसारकै खतरनाक एयरपोर्टमा नेपाल पहिलो,अमेरिकाको कोलराडो पाचौं – USNEPALNEWS.COM
बिबिसि भन्छ :संसारकै खतरनाक एयरपोर्टमा नेपाल पहिलो,अमेरिकाको कोलराडो पाचौं
तपाईंलाई कुनै एयरपोर्ट किन याद हुन्छ ? कुनै यात्रीलाई एयरपोर्टको लामो लाइन, एजेन्टका अनुहार, महँगा सामान वा फ्लाइटमा भएको ढिलाइ वा त्यसको लाउन्जका कारण सम्झिरहन्छन् ।
जब बीबीसी ट्राभलले यो प्रश्न वेबसाइट क्योरा डटकममा हाले तब मानिसहरुले एयरपोर्टको टेकअफ वा ल्याण्डिङको विशेष अनुभवका कारण याद हुने बताए ।
साधारणतया एयरपोर्टको रनवेको लम्बाई १८ सय मिटरदेखि २४ सय मिटरसम्म हुन्छ । तर जुन ६ रनवेको क्योरा प्रयोगकर्ताले सेलेक्ट गरे, ती लम्बाईमा मात्र छोटो नभई खतरनाक स्थानमा पनि छन् ।
१. नेपालः तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्ट
नेपालको तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्टको रनवेलाई तपाईं रोमाञ्चकताको दोस्रो नाम भन्न सक्नुहुन्छ । हिमालको चुचुराका बिचमा बसेको शहर लुक्लामा छ ४ सय ६० मिटर लामो रनवे ।
जसका कारण यहाँ साना विमान र हेलिकोप्टर मात्र ल्याण्ड गर्न सक्छ । रनवेको उत्तरमा हिमालका चुचुरा छन् भने दक्षिणमा ६ सय मिटर गहिरो खाल्डो । एउटा गल्ती दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार हुनेछ ।
क्योरा वेबसाइटको प्रयोग गर्ने एमी रबिन्सन भन्छिन्, ‘सगरमाथा चढ्ने मानिसहरु यसै एयरपोर्टमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । संसारको सबैभन्दा खतरनाक एयरपोर्टमध्ये एक हो यो ।’
२. स्कटल्याण्डः बारा एयरपोर्ट
नेपालको भन्दा निकै भिन्न छ स्कटल्याण्डको बारा एयरपोर्ट । समुन्द्रमा ज्वाराभाटा आउँदा यो एयरपोर्ट पानीमा डुब्ने गर्दछ ।
यो एयरपोर्ट ट्रेग मोर समुन्द्री तटमा बनेको छ । बाराद्वीपमा रहेको यो रनवे त्रिकोणीय आकार बनाउँछ र यहाँ काठका पोल लगाइएका छन् ता कि विमानलाई बालुवामा ल्याण्ड गर्न सजिलो होस् ।
३. माल्दीभ्यः माले एयरपोर्ट
माल्दीभ्सको माले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न पाइलटका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
यो संसारको एक्लो यस्तो एयरपोर्ट हो जुन अल्कत्राबाट बनेको छ र समुन्द्री तटबाट केवल दुई मिटर उचाइमा रहेको छ ।
यो एयपोर्ट द्वीपको एउटा कुनाबाट सुरु भएर अर्को कुनासम्म जाने गर्दछ । पाइलटको एउटा मात्र गल्तीले हवाईजहाज सिधा हिन्द महासागरमा गएर खस्छ ।
क्योरा वेबसाइट प्रयोग गर्ने पीटर बास्करविल भन्छन्, ‘यो संसारको एउटा यस्तो एयरपोर्टमा समावेश छ जुन पानीबाट सुरु भएर पानीमा नै समाप्त हुने गर्दछ ।’
हुलहुले द्वीप त्यो समूहको हिस्सा हो जुन ९० हजार वर्गको दायरामा फैलिएको छ । यसमा कूल १ हजार एक सय ९२ द्वीप छन् । हुलहुले द्वीपको पूरा प्रयोग यो एयरपोर्टका लागि मात्र गरिएको छ ।
यहाँ उत्रिएपछि पर्यटकले स्पिडबोर्डको मद्दतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने गर्दछन् ।
४. साबाः इरास्किन एयरपोर्ट
क्यूरोका एक अन्य प्रयोगकर्ता धारिया मानेकका अनुसार क्यारेबियाली द्वीप साबाको जूयानको ई इरासकिन एयरपोर्टमा ल्याण्ड गर्नु कमजोर मुटु भएका मानिसको वशको कुरा होइन ।
यो एयरपोर्टको रनवे व्यवसायिक उडानका लागि प्रयोग गरिएको रनवे मध्येको सबैभन्दो सानो हो । यो रनवेको लम्बाई करिब ३ सय ९६ मिटर हो । साधारण रनवे १८ सय मिटरदेखि २४ सय मिटरको लम्बाईमा हुने गर्दछ ।
यसको अर्थ यो हो कि यहाँ केवल साना विमान जसको गती तीब्र रुपमा कम हुन सक्छ, त्यसले मात्र अवतरण गर्न सक्छन् ।
यो रनवे जति सुन्दर छ, त्यती नै खतरनाक पनि । मानेक भन्छन्, ‘यो रनवे एक पर्वतीय चट्टानमा बनेको छ जुन तीन तर्फबाट समुन्द्रमा घेरिएको छ र एकतर्फ हिमालको चुचुरो छ । यहाँ जेट विमान अवतरण गर्न सक्दैनन् ।’
५. अमेरिकामा सबैभन्दा अग्लोः कोलोराडो एयरपोर्ट
यो अमेरिकाको कोलोराडोस्थित टेलूराइड रिजनल एयरपोर्ट २,७६७ मिटरको उचाईमा छ र उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो व्यवसायिक एयरपोर्ट हो ।
क्योराकी प्रयोगकर्ता इरिन विटलक भन्छ्,िन ‘यहाँ अवतरण गर्नु भनेको नसा खुम्चिने अनुभव हो । तर यो निकै सुन्दर छ ।’
टेलुराइडको सिंगल रनवे, चट्टानयुक्त पर्वतको एक हिस्सामा बनेको छ । यसको अगाडि ३ सय मिटरको गहिराइमा सान मिगुल नदी बग्ने गर्दछ ।
यद्यपी, सन् २००९ मा पुनर्निर्माण गरेर यो रनवेलाई सुरक्षित बनाइएको छ । अब यहाँ ठूला विमानले पनि उडान भर्न सक्छन् ।
एयरापेर्टका अधिकारीले सिंगल र लाइट ट्वीन इन्जिन भएका विमानले रातको समयमा उडान नभर्न सल्लाह दिन्छन् । त्यहाँ ३० नाटभन्दा बढिको हावा र १५ माइल्सभन्दा कम भिजिबिलिटीमा उडान भर्न पनि अनुमती छैन ।
हंगकंगः काई टाक
हंगकंगको काई टाक एयरपोर्ट निकै खतरनाक थियो । यति खतरनाक कि यात्रीहरु यहाँ ल्याण्ड गर्नुलाई काई टाक हार्ट अट्याक भन्दथे ।
क्योराका प्रयोगकर्ता जेय वाकर भन्छन्, ‘अब यो एयरपोर्ट प्रयोगमा छैन तर सन् १९२५ देखि १९९८ सम्म यहाँ विमान अवतरण गर्ने र उडान भर्ने गर्दथे । यहाँबाट उडान भर्नु र अवरतरण गर्नु संसारको आश्चर्यमध्येको एक थियो । यसको दुबैतर्फ ठूला भवन थिए । विशेषगरी ७४७ विमान अवतरण गर्नु यहाँ सबैभन्दा भयानक अनुभव थियो । उडान भर्ने र उत्रने बेला विन्डो सिटबाट तपाईं मानिसहरुको घरभित्र के भइरहेको छ, त्यो स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’
by खिम लामिछाने, पोखरा	 September 7, 2016
by USNEPAL NEWS	 January 17, 2017